Ee e. A na - ele Chineke Nna anya nanị otu onye a pụrụ ịkpọ ekpere. Aghọtara nke ọma na Kraịst na-anọchite anya Chineke na mmadụ (Hibru 7: 25). A na-ekpe ekpere niile site n'aka Kraist, ma ọ bụ n'aha nke Kraịst (John 16: 23-26).
A na-atụ anya na onye ọ bụla nọ na chọọchị ga-ezukọta maka ofufe n'ụbọchị nke Onyenwe anyị ọ bụla. Akụkụ bụ isi nke ofufe bụ iri nri abalị nke Onyenwe anyị (Ọrụ 20: 7). Ọ gwụla ma ọ bụrụ na a gbochiri ya n'ụzọ doro anya, onye ọ bụla na-ele ọrụ izu ụka a anya dị ka ihe. N'ọtụtụ ọnọdụ, dị ka a na-ahụ maka ọrịa, a na-eburu nri abalị nke ndị na-egbochi ịbịa ofufe.
N'ihi nkwenye dị iche iche nke ụka - nlọghachi na Agba Ọhụrụ Okwukwe na omume - abụ acappella bụ nanị abụ e ji mee ihe n'ofufe ahụ. Egwú a, nke na-ejighị ngwá egwú na-akwadoghị, na-adabere na egwú e ji mee ihe na chọọchị ndị apostol na ọtụtụ narị afọ mgbe nke ahụ gasịrị (Ndị Efesọs 5: 19). A na-eche na ọ dịghị ikike maka itinye aka n'ofufe ndị a na-ahụghị n'Agba Ọhụụ. Ụkpụrụ a na-ewepu iji ụda akwara, tinyere iji kandụl, ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na ihe ndị yiri ya.
Ee. Okwu nke Kraist na Matiu 25, na ebe ndị ọzọ, na-ewere ya na ọ bara uru. A kwenyere na mgbe ọ nwụsịrị, nwoke ọ bụla aghaghị ịbịakwute Chineke n'ikpe nakwa na a ga-ekpe ya ikpe dịka omume ndị o mere n'oge ọ dị ndụ (Hibru 9: 27). Mgbe a kwusịrị ikpe, ọ ga-ebi ebighi ebi n'eluigwe ma ọ bụ hel.
Ee e. Enweghị akwụkwọ ọ bụla e kwuru na Akwụkwọ Nsọ maka ebe a ga-enye ntaramahụhụ nke sitere na mkpụrụ obi ga-emesị tọhapụ ya n'eluigwe na-egbochi ịnakwere ozizi purgatrị.
Kwa ụbọchị mbụ nke izu, ndị òtù ụka "na-echere ha dị ka ọganihu" (1 Corinthians 16: 2). A na-amarakarị ego ọ bụla onyinye ọ bụla maka onye nyere ya na Onyenwe anyị. Onyinye a na-enye n'efu bụ nanị oku nke ụka na-eme. Enweghị nnyocha ọ bụla ma ọ bụ ụtụ ndị ọzọ. Enweghị ọrụ ego, dị ka ezumike ma ọ bụ nkwado, na-etinye aka na ya. Nchịkọta ma ọ bụrụ na a na-enye $ 200,000,000 na nke a kwa afọ.